Aqriso Waxyaabaha Keena Madax Adeega Caruurta & Qodobo Kuu Sahlaya Sidaad Ula Dhaqmi Lahayd Caruurta Madaxa Adag - iftineducation.com
iftineducation.com – Sidee Ayaan Ula DHaqmeynaa Caruurta Madax Adag?!.
Ugu horeyntii,Ilaah ayaa mahad iska leh,Nabigeena naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaato (NNKH).
Intaas kadib,su’aalaha u baahan in la fahmaa waxey tahay waa maxay madax adag? Maxaa keena sideese loola dhaqmi karaa?
Madax adeygu ma aha ilmuhu marka ay yaryihiin kaliya,balse kuwa waa weyba waa yeelan karaan,haddaba madax adeygu waa maxay?
*Madax adeygu ama(Caniidnimadu)waa ilmaha oo ku adkeysta waxa uu duunayo,una hogaansami waaya hadalada waalidka iyo amaradooda,taasoo socota mudd gaabaan iyo mid dheerba,iyadoo dhici karta inuu ilmuhu ku weynaado haddii aan wax laga qaban.
Waxyaabaha Keenaya Madax Adeyga!
*waalidka oo inta badan ilmaha siinin waqti uu ku qaato go’aan kaligiisa,iyagoo marwalba soo dhex gala,taasoo keenta inuu ilmu dareemo inuusan go’aan gaadhi Karin.
*Iyo inuu ilmuhu wax dalbado marmar badan helina waayo ,taasoo keenta inuu naftiisa canaado,sida inuu cuntada diido ilaa ay hooyadiisa kaga barido inuu cuno.
*Iyo iyadoo ay jirto xili ilmuhu ay dareemaan in gacan lagu haayo oo haddii wax loo sheegaba uu afka taagaayo,waqtigaasina waa marka uu soo weynaado xooga uuna raba inuu soo muujiyo awoodiisa,iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda,aad bey u badanyiihin waxyaabaha keena sida ilmaha oo aan dhameystirneyd caqligooda wey keeni kartaaa,ilmaha oo loo dhiibo wax awoodiisa kabadan,sidoo kale iyagaa isku haleeya hooyadooda ,ama qofka barbaariyey(murabiyada , shaqaalada) iyo isagoo wax walba loo sameeyo.
Haddaba Sidee Ula DHaqmi karnaa!.
1.Inaan lagu qasbin ilmaha adeecida amarada.
2.In lagu mashquuliyo,ilmaha marka ay yaryiihin,wax yaabaha o ay fahmi karaan.
3.In lala sheekeysto ilmaha si dagan,lana qanciyo,oo mararka qaar loo sheego inuu isagu saxanyahay si looga hortago madax adeyga.
4.In hadii uu wax haleeyo markaasba la ciyaaqbo si toos ah ,taasoo aan ahayn mid isaga wax yeeleyneysa ama dhibeysa sida inaadan ka reebin iskuulka aadana u diidin banaanka , inaadan garaacin si xoog ah caayina,kuna qeylinin.
5.inaad amaanto ilmaha wax qabadkooda,aadna ku abaalmariso markuu wax hagaajiyo,haddii aad wax u balan qaadana isku day inaad siiso waayo ilmahu marka hore hadduu kaa wayo marka kale wuxuu u maleynaa inaad been u sheegi,waa inaad u noqotaa ku dayasho wanaagsan.
6.Inaad caruurta kale hortooda ku canaananin ,waayo wuxuu dareema inuusan la mid ahayn naftiisana kuma kalsoonaanaayo.
7.Inaad barto hababka wanaagsan ee loola dhaqmo caruurta kale, sida loola doodo(niqaasho) oo aad barto ixtiraamka naftiisa iyo mida kalaba.
8.Inaad si fiican u dhageysato oo dagan markuu kula hadlaayo ,dhageysiga ilmahu waxey dareemaan kalsooni aad ad iyo in aad loo jecelyahay.
9.in aad wada ciyaarsiiso isaga iyo ilmaha kale,oo aad wada wadaagtaan dhamaantiina si uu u barto dhexgalka bulshada oogana ba’o canaadku,dhistana naftiisa.
10.Inaad u sabarto,ileen ma sahlana ilmo madax adage,ulana dhaqanto si xikmadeysan, dhiiri galiso,caawiso,aadna u handadin oodan caajisin.
Guntii iyo gaba gabadii,waxaan ku soo gababeynayaa mowduuceyga,kulana dardaarmaya nafteyda iyo tiinaba in ilmaha marka ay yaryihiin oo ay waxqabasho leeyihiin wax walba in la baro,iyadoo laga dhowraayo awood in loo sheegto,laguna qeylinin,waqtina in la siiyo,gaar ahaan aabayaasha iney ilmahooda waqti la qaataan una sameeyaan jaddwal u gaar ah.
Wixii sax ah oon qorayna waa mid xagga EEBE ka yimid, wixii khaladna waa mid nafsadayda ka timid waxaana rajaynayaa in dhamaan laga wada faa’idaysan doono insha Allah.